Block gilasy milina
milina gilasy 3T flake
10T Tube milina gilasy
5T fantsona gilasy milina
milina gilasy 5T flake
3T fantsona gilasy milina
Hery mandeha: 9.375 KW.
Ny maripanan'ny ranomandry: Minus 5 ℃.
Ny kalitaon'ny gilasy: mangarahara sy kristaly.
Savaivony gilasy: 22mm, 29mm, 35mm na hafa.
Famatsiana herinaratra: famatsiana herinaratra indostrialy 3 phase.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 3000 kg fantsona gilasy isaky ny 24 ora.
Fepetra fiasa mahazatra: 30 ℃ ambient ary 20 ℃ ny mari-pana amin'ny rano.
Fanjifana herinaratra: 75 KWH ny herinaratra hanaovana isaky ny 1 taonina ny ranomandry.
Hery mandeha: 15.625 KW.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 5000 kg fantsona gilasy isaky ny 24 ora.
Hery mandeha: 31.25 KW.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 10.000 kg fantsona gilasy isaky ny 24 ora.
20T fantsona gilasy milina
Hery mandeha: 62,5 KW.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 20.000 kg fantsona gilasy isaky ny 24 ora.
milina gilasy 2T flake
Hery mandeha: 6.25 KW.
Ny hatevin'ny ranomandry: 1.8-2.2mm.
Ny fahafahan'ny fitehirizana gilasy: 500kgs ny glace flakes na namboarina.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 2000 kg ny glace flakes isaky ny 24 ora.
Ny fahafahan'ny fitehirizana gilasy: 1500 kg ny glasy flakes na namboarina.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 3000 kg ny glace flakes isaky ny 24 ora.
Ny fahafahan'ny fitehirizana gilasy: 2500 kilao ny ranomandry na namboarina manokana.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 5000 kg ny glace flakes isaky ny 24 ora.
milina gilasy 10T flake
milina gilasy 20T flake
Ny fahafahan'ny fitehirizana gilasy: 10.000 kilao ny tavin-dranomandry na namboarina manokana.
Ny fahafaha-mamokatra ranomandry isan'andro: 20.000 kg ny glace flakes isaky ny 24 ora.
Horonantsary hanehoana ireo evaporatora gilasy vita amin'ny teo aloha. Herbin Ice Systems dia iray amin'ireo mpanamboatra evaporator gilasy lehibe indrindra any Shina. Manamboatra sy mivarotra evaporator glace flake amin'ny orinasa mpamokatra gilasy sinoa hafa sy any amin'ny tsena any ivelany izahay. Ny 60%-n'ny milina gilasy sinoa dia manana fitaovana fanamafisam-panafana gilasy. Ny evaporators gilasy flake dia ampiasaina eran'izao tontolo izao, toa an'i Etazonia / Meksika / Brezila / Gresy / Afrika Atsimo / sy ny sisa. Ny evaporators glace flake dia r...
Masinina gilasy 300kg/andro + koba fitehirizana gilasy 150kg.
Ny milina dia manana endrika plug-and-play. Izy io dia vonona amin'ny fanaovana gilasy aorian'ny fifandraisana tsotra amin'ny rano sy ny hery. Mivoaka ao anatin'ny 5 minitra ny ranomandry rehefa manindry ny bokotra fanombohana ny mpampiasa.
Ny asa rehetra amin'ny fanaovana gilasy dia vita ho azy tanteraka eo ambany fifehezan'ny PLC.
Ny rafitra dia hiaro ny tenany amin'ny tsy fahampian-drano / ranomandry feno ranomandry / famatsiana herinaratra tsy miorina / avo be na mangatsiaka ny hafanana manodidina / sy ny karazana tsy fahombiazana hafa.
Ny hafanan'ny evaporating natao dia minus 20C, izay miantoka ny ranomandry tsara kalitao. Mivoaka avy ao amin'ilay milina ny tavin-dranomandry maina sy matevina.
Ny fitoeram-boankazo misy gilasy 300kg/andro dia afaka mitahiry ranomandry 150lgs, izay mihoatra noho ny ranomandry vita amin'ny alina. Noho izany dia afaka miala amin'ilay milina ny mpampiasa ary manao azy hiasa irery amin'ny alina. Ho feno ranomandry be dia be rehefa manokatra ny varavaran'ny gilasy ny mpampiasa ny maraina.
Ny 80% amin'ireo singa amin'ny milina gilasy dia marika malaza iraisam-pirenena mba hiantohana ny fahombiazan'ny asa sy ny fotoana maharitra.
500kg/andro milina gilasy + 300kg fitobiana gilasy.
Ny milina dia manana endrika plug-and-play. Izy io dia vonona amin'ny fanaovana gilasy aorian'ny fifandraisana tsotra amin'ny rano sy ny hery. Mivoaka ao anatin'ny 5 minitra ny ranomandry rehefa manindry ny bokotra fanombohana ny mpampiasa. Ny asa rehetra amin'ny fanaovana gilasy dia vita ho azy tanteraka eo ambany fifehezan'ny PLC. Ny rafitra dia hiaro ny tenany amin'ny tsy fahampian-drano / ranomandry feno ranomandry / famatsiana herinaratra tsy miorina / avo be na mangatsiaka ny hafanana manodidina / sy ny karazana tsy fahombiazana hafa. Ny mari-pana evaporating natao dia minus 20C, izay miantoka ny goo...